त्यहाँ पैसा को लागि एक जरुरी आवश्यकता छ जब, र एक पटक धेरै गम्भीर प्रश्न नगद एक ऋण लिन जहाँ लाभदायक रूपमा खडा मा नातेदार र साथीहरू, सहायता गर्न सक्दैन। को संस्थाहरू कुन रोज्ने: बैंक वा पीडीए, वा धरौटी सुविधा पसल MFI? भविष्यमा उधारकर्ताओं soberly अन्ततः यी मापदण्ड स्पष्ट जहाँ नगद मा अनुकूल ऋण प्राप्त गर्न गर्नेछ किनभने, उनको तागत र लाभ आकलन गर्नु पर्छ।
एक उपभोक्ता क्रेडिट के हो
उपभोक्ता क्रेडिट बैंक वा अन्य उधारो संस्थाले उधारकर्ताओं गर्न जारी गर्नेछ भन्ने एक पैसा छ। पैसा को एक योगफल द्वारा जारी उधारो रकम मा आवश्यक चासो भुक्तानी संग, मासिक installments मा उपकारको साटो तिरे हुनुपर्छ।
उपभोक्ता ऋण धेरै भागमा विभाजन गरिन्छ। अब हामी तिनीहरूलाई हेर्न।
ऋण को प्रकार द्वारा
सोच जहाँ यो नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ - बैंक वा क्रेडिट र उपभोक्ता एक सहकारी, जवाफ पाउन प्रयास गर्नुहोस्। त्यो हो, creditor मात्र बैंक हुन सक्छ।
कार्य अभिमुखीकरण प्रकार द्वारा
बैंक ऋण एक विशेष उत्पादन वा सेवा खरिद गर्न पैसा प्राप्त गर्न वर्गीकृत छन्। यो उद्देश्य ऋण, थप अनुकूल अवस्था द्वारा विशेषता छ जो: को कम वार्षिक दर, परिशोधन लागि लचिलो सर्तहरू, साथै सरकारी सब्सिडी प्राप्त गर्ने अवसर (राज्य समर्थन संग लक्षित विद्यार्थी ऋण प्राप्त फाइदा लिन)। उधारकर्ता, एक ऋण लक्ष्य नगद मा पैसा प्राप्त गर्दैन बाहिर बनाउने, तिनीहरूले सिधै माल वा सेवाहरूको आपूर्तिकर्ता एक cashless फारममा हस्तान्तरण छन्।
उद्देश्य ऋण, यसको विपरीत, कि तपाईं आफ्नो मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र ऋण धन को उधारकर्ता द्वारा जारी क्रेडिट संस्थाले रिपोर्ट प्रदान नगर्नुहोस् नगद प्राप्त समावेश छ।
जमानत को प्रकार द्वारा
जारी ऋण, सफ्टवेयर द्वारा समर्थित गर्न सकिन्छ उदाहरण, ग्यारेन्टी वा जमानत को सम्झौता लागि। सम्पत्ति (चल्ने र immovable) जमानत रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। उधारकर्ता यो ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन जो कुनै पनि वित्तीय अवस्थामा छ भने, बैंक आफैले प्रतिज्ञापत्र स्थित आफ्नो सम्पत्ति लाग्न सक्छ। यदि त्यहाँ जमानत मा सम्झौता छ, उधारकर्ता ऋण चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ जब, यो जिम्मेवारी आफ्नो surety संग आराम हुनेछ। जब जमानत वार्षिक प्रतिशत बिना भन्दा कम।
असुरक्षित ऋण, वा, अर्को शब्दमा, असुरक्षित मा, बैंक द्वारा जारी मात्र क्रेडिट इतिहास नियमित आय र अख्तियार भएका उधारकर्ताहरु को कोटीमा। यस मामला मा प्रदान धन को मात्रा विद्यमान बैंक आफ्नै धन भित्र तर एक उच्च वार्षिक दर छ।
द्वारा उधारकर्ताओं प्रकार
यो वर्ग बारी मा, धेरै समूह विभाजन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, जसको उमेर जवान मान्छे को परिवार, राज्य समर्थन संग उपभोक्ता क्रेडिट प्राप्त प्रदान 30 वर्ष को मार्क, अधिक छैन। यो क्रेडिट लक्षित गर्न सकिन्छ (बंधक, कार ऋण) वा विश्वव्यापी (गैर-लक्षित)।
विचार निम्न समूहहरू जहाँ यो पेंशनरहरुलाई गर्न नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ को प्रश्नको जवाफ प्राप्त। एक पेन्सन को रूप मा आय को एक स्थिर स्रोत आधारित उपभोक्ता ऋण पेंशनरहरुलाई गर्न बैंक द्वारा जारी। यो प्रयोग गर्न सक्षम हुन ऋण को प्रकार, तपाईं अनिवार्य सर्त पालना गर्नु अनिवार्य - को retiree-उधारकर्ताओं काम गर्नुपर्छ। एक पेन्सन र काम को उपलब्धता प्राप्त गर्न pensioner सक्षम हुनेछ नगद थप आकर्षक क्रेडिट सर्तहरूको मा।
ऋण को उत्तराधिकारी प्रकार - राम्रो क्रेडिट इतिहास संग उधारकर्ताओं लागू र creditor बैंकमा बारम्बार बुझाउँछ। यस पटक सन्दर्भ उधारकर्ताओं मा न्यूनतम औपचारिक प्रक्रिया, यो तुरुन्तै उधारो रकम प्रदान गरिने पछि पारित गर्न पर्याप्त हुनेछ।
को परिशोधन प्रकार अनुसार
दुई तरिकामा यो ऋण भुक्तानी गर्न।
मानक - installment भुक्तानी। भुक्तानी एक वर्दी रकम मासिक वा त्रैमासिक आधारमा बनेको छ। भुक्तानीको मात्रा निश्चित वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
एक समय - यो ऋण सम्झौता निर्दिष्ट केही मिति पैसा को एक गांठ योगफल बनाउन शामिल।
गांठ योगफल भुक्तानी - हरेक सक्षम-bodied उधारकर्ताओं जारी। ऋण को यस प्रकार सबैभन्दा लोकप्रिय छ। बैंक प्रत्येक व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आवेदन र जारी भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता को आधार मा गणना गरिएको छ पैसा को मात्रा विचार छ।
अक्षय भुक्तानी, यो परिक्रामी छ, उधारकर्ता छैन सम्पूर्ण ऋण रकम एकैचोटि छ, तर तोकिएको समय अवधि भित्र एक क्रमिक स्थानान्तरण मा प्रदान गर्न छ। यस मामला मा एक सकारात्मक पक्ष उधारकर्ता उहाँले एप्लिकेसनमा संकेत कि पैसा को मात्रा प्राप्त आश्वासन सकिन्छ भन्ने छ।
सर्तहरू प्रकार द्वारा
जहाँ यो खातामा आर्थिक अस्थिरता को स्थिति लिएर, रूस मा नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ? आज, जनसंख्या गर्न ऋण प्रदान रूसी बैंकहरू, conditionally तिनीहरूलाई अल्पकालीन, जहाँ एक भन्दा कम वर्ष को फिर्ती अवधि र दीर्घकालीन, यो चिन्ह माथि मा विभाजित। अल्पकालीन ऋण एक निश्चित अवधि (सामान्यतया कम 12 भन्दा महिना) वा माग लागि जारी छन्। त्यसपछि, कारण ऋण को परिशोधन लागि एक निश्चित मिति को कमी गर्न, बैंक कुनै पनि समयमा ऋण चुक्ता गर्न उधारकर्ता आवश्यक अधिकार छ।
बैंक मा उपभोक्ता क्रेडिट प्राप्त
क्रेडिट प्राप्त गर्न 18 वर्ष उमेर मुनिका एक व्यक्ति योग्य हुन सक्छ (या 21 वर्ष, सीमा एक बैंकिङ संस्थाले सेट) र 70 वर्ष को एक सीमा भन्दा बढी छैन।
प्रत्येक बैंक स्वतन्त्र क्रेडिट रकम प्राप्त गर्न चाहने लागू आवश्यकताहरु स्थापना गर्नेछ। उधारकर्ता को आय को एक स्थिर स्रोत उपस्थिति - तर सबै बैंकहरू लागि विश्वव्यापी आवश्यकता छ। ज्याला बुझाउँछ आय को स्रोत द्वारा। साथै, उधारकर्ता आफ्नो वैकल्पिक यस्तो जमानत मा सम्पत्ति (घर, ग्यारेज वा अन्य क्षेत्र) वा लाभांश को पट्टा देखि आय रूपमा, आय को स्रोतहरु को उपस्थिति बारेमा बैंक सूचित हुन सक्छ। यी स्रोतहरू दस्तावेज गर्न आवश्यक हुनेछ।
कागजातहरूको गुणस्तर बैंक स्थान को क्षेत्र मा नागरिक राहदानी र अनिवार्य स्थायी दर्ता गर्दछ। उधारकर्ता को तलब बताउँछ सोधिने प्रश्न र आफ्नो जागिर रेकर्ड को प्रतिलिपि पनि पैसा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात हुनेछ। एक सैन्य आईडी, जमानत मा जिम्मा / छोडपत्र कागजातहरू प्रमाण: untied ऋण प्राप्त गर्न, बैंक अतिरिक्त कागजात प्रदान गर्न उधारकर्ता सोध्न सक्छ।
उधारकर्ता केही बैंकिङ कारक अन्तर्गत पतन भने, यो एकदम बैंक द्वारा प्रस्तावित वार्षिक ब्याज घटाउन र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ:
उधारकर्ता 25 45 वर्ष देखि उमेर span गर्न पाउँछ।
उधारो बैंक कार्ड मा उधारकर्ता अनुवाद को मासिक तलब ठाँउ लिन्छ।
उधारकर्ता महान् कार्य अनुभव मा।
उधारकर्ता एक क्रिस्टल क्रेडिट इतिहास छ।
प्रभावकारी ब्याज दर बैंक द्वारा प्रस्तावित
अनुसार लागू कानून संग, जिम्मेवारी को रूप मा बैंकमा उधारकर्ता गरेको प्रभावकारी ब्याज दर गर्न खुलासा गर्न। यो वार्षिक ब्याज दर प्लस सम्भव बैंक आयोग को एक संग्रह हो। यो दर, बैंक क्रेडिट धन को प्रयोग को लागि चासो गणना हुनेछ, त्यसैले तपाईंले यो बिन्दु थाह गर्न थप विस्तार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि आवश्यक छ।
बैंक द्वारा चार्ज शुल्क
कुनै पनि बैंक जारी श्रेय आयोग लगाएको। आयोग जो उधारकर्ता उदाहरण, ऋण आवेदन, क्रेडिट को जारी लागि शुल्क लागि, केवल 1 समय दिन्छिन्, डिस्पोजेबल हुन सक्छ। उधारकर्ता प्रारम्भिक को उधारो रकम रिटर्न भने, यसको लागि पनि आयोग चार्ज गर्न सकिन्छ।
नियमित आयोग अवधारणा हो: क्रेडिट कार्ड को वार्षिक सर्विसिंग, क्रेडिट कार्ड देखि नगद निकासी। आयोग सबै दिइएको, उधारकर्ता निर्णय गर्नै पर्छ जहाँ यो नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ।
उपभोक्ता क्रेडिट को परिशोधन
वार्षिकी र भिन्नता: वहाँ जो यस ऋण चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ दुई योजनाहरू छन्। पूर्वनिर्धारित रूपमा, धेरै बैंक वार्षिकी जो हरेक महिना एक निश्चित रकम शुरू comprises, भुक्तानीको फारम प्रयोग गरेका छन्। प्रमुख र रुचि: वार्षिकी भुक्तानी दुई भागहरु हुन्छन्। हरेक महिना त्यहाँ विपरीत, प्रमुख को परिशोधन र आर्जित ब्याज निर्देशित छ जो भुक्तानी को राशि मा वृद्धि छ, घट्छ। जब यसको सेवाहरू लागि ऋण चासो परिशोधन को यो विधि बाँकी प्रमुख रकम मा गणना गरिएको छ।
ऋण परिशोधन को अंतर विधि, यो सबै भन्दा ठूलो सुरु हुने, विभिन्न मासिक भुक्तानी बनाउन शामिल छ, र बिस्तारै घट्दै छ।
कुनै पनि वित्तीय संस्थाले बैंकहरू एक निश्चित समय अधिस्थगन, उधारकर्ता तालिका को अगाडी ऋण चुक्ता गर्न सही छ जुन बेलामा सेट त, एक ऋण बाहिर ले को चाँडै फिर्ती रुचि छैन। सामान्यतया यो 16महिनाका दायरा। वा बैंकहरू केही समय तालिका को ऋण अगाडि चुक्ता गर्न अनुमति, तर अग्रिम भुक्तानी छ जो राशि, को राशि मा नै समय 1-12% आयोग बाट भुक्तानी मा। तसर्थ, आयोगहरु र ब्याज दर विभिन्न प्रकारका लागि तयार जहाँ सबै भन्दा अनुकूल क्रेडिट नगद लागत लिन बारेमा सोच।
क्रेडिट उपभोक्ता सहकारी (सीसीपी)
इच्छा छैन जो कारण लागि उधारकर्ता, बैंक लागू गर्न भने, तपाईं पीडीए लागू गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कहाँ यो येकाटिरिनबर्ग मा नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ को प्रश्नको जवाफ प्रयास गर्नुहोस्। को सीसीपी, जो 20 भन्दा बढी मा संगठनहरूको। यो "संघ", "सुन पूल" "संवर्धन", र अरूलाई छ।
क्रेडिट र उपभोक्ता सहकारी प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति, एक निश्चित सुविधा द्वारा एकताबद्ध समावेश जो एक संघ छ।
नगद लागि योग्य, तपाईं हुनुपर्छ:
एक सदस्य बन्न र भुक्तानी एक सदस्यता शुल्क।
एक वयस्क हुन।
रूस मा कुनै पनि दर्ता छ।
ऋण उपलब्ध कागजात समावेश:
उधारकर्ता को श्रम को भुक्तानी को आकार निर्दिष्ट कि एक प्रमाणपत्र (को हिस्सेदार पहिलो पटक ऋण व्यवस्था छैन, यदि वा लामो समय को लागि सह-अप मा खाता लागि तलब वा पेन्सन हस्तान्तरण गरिएको छ, प्रमाणपत्र आवश्यक छैन)।
पैसा अधिकतम सम्भव राशि सीसीपी जारी गर्न सक्छ भन्ने, सबै उल्लेखनीय ऋण को 10% भन्दा बढी छैन उसलाई extradite निर्णय को मितिमा।
फिर्ती प्रत्येक हिस्सेदार लागि व्यक्तिगत रूपमा गणना गरिनेछ, र ऋण भुक्तानी तालिका को सम्झौता गर्न संलग्न प्रदर्शित हुन्छन्।
उधारकर्ता लागि सीसीपी आवश्यकताहरु छलफल भएको, सबैलाई निःशुल्क जहाँ यो नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ निर्णय छ।
यदि उधारकर्ता सामान्य क्रेडिट इतिहास भएको घमण्ड गर्न सक्दैन, र त्यहाँ बैंक न त सीसीपी न उसलाई पैसा Microfinance संस्थाहरू (MFIs) गर्न जानु पर्छ दिन छैन भन्ने डर हो। जहाँ यो ओम्स्क मा नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ? केही MFIs मा सम्बोधन गर्न राम्रो छ? आज ओम्स्क को शहर मा, नगद एक ऋण बाहिर लिन चाहने ती सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर 30 भन्दा बढी MFIs छन्।
तपाईं बहुमत को उमेर पुग्न र नागरिक कागजात (राहदानी) प्रदान गर्नुपर्छ: एक ऋण सरल छ गर्नुहोस्। प्रत्येक IFI यसको आफ्नै न्यूनतम र नगद अधिकतम रकम छ। विविध र बदलाव पटक। उदाहरणका लागि, "एक्सप्रेस-क्रेडिट" मा तयार अप 100 000 rubles मा दिन 0.4% द्वारा र माथि 24 महिना अवधिका लागि जारी गर्न। एक "भुक्तानी गर्न", यसको विपरीत, 10 000 rubles अधिकतम बाहिर दिन, प्रति दिन र 20 दिन को एक परिशोधन अवधि 1% को भुक्तानी संग।
यहाँ एक आकर्षक नगद ऋण जहाँ लिन उधारकर्ता, को छनोट।
उधारकर्ता क्रेडिट संस्थाले को निर्णय को लागि प्रतीक्षा र आवश्यक आवेदन र फारम भर्न चाहनुहुन्छ भने, उहाँले pawnshop गर्न पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ यो मास्को मा नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ? लोम्बार्डी मा।
तपाईं चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, हेर्छ र घडीहरू को गरे आभूषण सुनको गरे, र कटलरी लाग्न सक्छ। त्यहाँ जमानत, घर उपकरण, मोबाइल फोन र फर कोट स्वीकार एक श्रेणी मोहरा पसलहरूमा छ।
प्रस्तावित क्रेडिट संस्थाहरू छलफल भएको, प्रत्येक उधारकर्ताओं नगद एक उपभोक्ता ऋण लिन जहाँ लाभप्रद ठाउँ रोज्ने।
रूस मा आज, क्रेडिट को धेरै उधारकर्ताहरु को सबै विभाग लागि प्रदान गर्दछ। जहाँ यसलाई नगद एक ऋण (इंटरनेट समीक्षा) लिन लाभदायक छ, पढ्ने, कुनै पनि क्रेडिट संस्थाले राम्रो सम्हाल्न कुनै स्पष्ट जवाफ त्यहाँ छ। प्रत्येक मामलामा फरक छ र प्रत्येक सबै भन्दा राम्रो विकल्प आफूलाई लागि रोज्नुपर्छ।
ऋण को सार: कारणहरू, फाराम, शब्द को अवधारणा
म एक पासपोर्टको लागि क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्छन्?
बैंकहरू, कागजात र सिफारिसहरू सूची: कुनै आधिकारिक काम संग एक ऋण कसरी प्राप्त गर्न
6 भन्दा दीर्घकालीन तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने इतिहास मा ऋण?
भारतीय व्यञ्जन: तस्बिर संग व्यञ्जनहरु
शाओलिन भिक्षुहरूले: तिनीहरूले साँच्चै हो?
जहाँ Pokemon धेरै? जहाँ मास्को मा Pokémon लागि हेर गर्ने?
परिवारको कुल आय परिवार सबै सदस्यहरूको भुक्तानी हुन्छन्
वर्णन, मोडेल मिश्रण र समीक्षा: संग रातो कालो पोशाक
सामाजिक गतिशीलता: प्रकृति र प्रकार
"एल Carnitin पावर प्रणाली" सही आंकडा सिर्जना